Akhriso 14 ka qodob oo Madaxwaynihii hore ee Gambia wadanka looga saaray | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Akhriso 14 ka qodob oo Madaxwaynihii hore ee Gambia wadanka looga saaray
Akhriso 14 ka qodob oo Madaxwaynihii hore ee Gambia wadanka looga saaray
Madaxwaynahii hore ee dalka Gambia Yahye Jammeh, ayaa ka degay xilka kana dhoofay wadankaasi, ka dib wadahadalo maalmo badan qaatay oo ka dhacay Magaalada Banjul ee Caasimadda dalka Gambia.
Haddaba ka bixitaanka Yahye Jammeh, uu wadanka ka baxay ka dib waxaa soo baxay 14 qodob oo isaga wadanka UGA baxay.
Waxaan jeclahay inaan halkan kusoo koo-koobo 14 kaasi qodob ee ay soo saareen urur gobaleedka ECOWAS, Midowga Africa iyo QM.
1- ka dib go’aankii ka soo baxay shirkii 17 Dec. 2016 madaxda ECOWAS ay ku yeesheen Magaalada Abuja Nigeria, waxaa la Isla gartay in arinka Gambia loo wajaho qaab diblumaasiyadeed.
Gudoomiyaha ECOWAS, ahna Madaxwaynaha dalka Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, Madaxwaynaha Nigeria, Muhammadu Buhari,madaxwaynihii hore ee Ghana John Dramani Mahama, iyo Madax kale ayaa waxaa ay u duuleen dalka Gambia, si ay ula hadlaan Sheekh Professor Alhaji Dr. Yahya A. J. J. Jammeh, madaxwaynihii hore ee Gambia.
2 ka dib dhex-dhexaadintii Moxamed Ould Abdel Aziz Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania iyo Madaxwaynaha Dalka Guenea Conekry Alpha Conde, waxaa lagu dhawaaqay in arrinta Gambia qaab nabad ah lagu soo gebagebeeyay.
3- si loo ilaaliyo madaxbanaanida, amaanka iyo badbaadada Shacabka, Gambia waxay go’aansatay in xilka si nabad ah lagu kala wareego.
4- ECOWAS, Midowga Africa iyo QM, waxaa ay dowladda cusub ee Gambia ka taageeri doonaan sidii loo ilaalin lahaa amaanka iyo xuquuqda Madaxwaynahii hore ee dalka Gambia ayadoo la tix-raacayo dastuurkii 1997dii iyo shuruucda kale ee dalkaasi.
5- ECOWAS, Midowga Africa iyo QM, waxaa ay dowladda kala shaqayn doonaan, sidii loo hali laha sugnaansho dhab ah oo ku aadan ilaalinta Sharafta,Ammaanka, xuquuqda iyo badbaadada Yahye Jammeh, qoyskiisa, wasiiradiisii, saraakiishiisii dowladda, xisbigiisa iyo dadka isaga daacadda u ah.
6- ECOWAS Midowga Africa iyo QM waxaa ay go’aamiyeen in dowladda cusub ee Gambia aysan samayn Karin talaaboyin sharci ka dhigaya wax yeelaynta Yahye Jammeh.
7- ECOWAS Midowga Africa iyo QM waxaa ay qaadayaan talaabo walba oo laga maarmaan ah si loo xaqiijiyo in aysan jirin Hanjabaad iyo ugaarsi loo gaysto maamulkii hore iyo taageerayaashiisa.
8- ECOWAS Midowga Africa iyo QM waxaa ay go’aamiyeen in laga hortago qabsaahada hantida sida sharciga ah ee uu leeyahay Yahye Jammeh, qoyskiisa wasiiradiisii saraakiishiisii dowladda xisbigiisa.
9-si looga fogaado in arrimahaasi ay dhacaan ECOWAS Midowga Africa iyo QM waxaa ay go’aamiyeen in dowladda cusub ee Gambia ay kala shaqayn doonaan sidii loo hali laha dib-uheshiisiin guud.
10- ECOWAS Midowga Africa iyo QM waxaa ay hoosta ka xareeqayaan muhiimadda ay leeyahay in ciidanka difaaca ay ilaaliyaan in wadanka uusan ka dhicin wax kala qaybsanaan ah.
11- dowladdaha qaabilay Yahye Jammeh iyo qoyskiisa waa inay hubiyaan inuusan jirin wax dhibaato ah oo loo gaystay.
12- si qaab nabad ah awooda loogu kala wareego iyo in la abuuro dowlad iyo nidaam cusub, Yahye Jammeh waa inuusan wadanka ka baxaa si KMG ah.
13- ECOWAS Midowga Africa iyo QM, waxaa ay dowladda cusub ee Gambia kala shaqayn doonaan in Yahye Jammeh xiliga uu doono dalka dib ugu soo laaban karo.
14- Shaacinta qodobadan waxaa ay hakin doonaan wax howlgal militari ah oo ka dhaca Gambia.
Previous articleAU, ECOWAS and UN joint statement on Yahye Jammeh
Next articleCabdi Xashi oo loo doortay Gudoomiyaha Aqalka Sare iyo Abshir Bukhaari oo loo doortay ku xigeenka 1-aad